Ungakuthuthukisa kanjani isu lokuqwashisa ngesaziso esifanele emakhampasi
Ochwepheshe bezimboni baphakamise ukuthi abaphathi bezikole kufanele bamukele izindlela ezahlukahlukene ukufeza uhlelo oluhle kakhulu lwezimo eziphuthumayo. Lokhu kufanele kufake ...
Ochwepheshe bezimboni baphakamise ukuthi abaphathi bezikole kufanele bamukele izindlela ezahlukahlukene ukufeza uhlelo oluhle kakhulu lwezimo eziphuthumayo. Lokhu kufanele kufake hhayi ubuchwepheshe bokugcina nje, kodwa futhi nokuxhumana kwendabuko.
Ezingeni layo eliyisisekelo, insizakalo yesaziso esiphuthumayo kufanele ikwazi ukusakaza imininingwane ngokugcwele- Izikolo ezikalwa izikole ngesilinganiso esisheshayo ngokusebenzisa iziteshi ze-Multiplex. Kufanele kufinyelele kubafundi, othisha kanye nabanye abasebenzi ngokusebenzisa abezindaba kufaka phakathi imiyalezo yezwi, ama-imeyili, kanye nezinsizakalo zemiyalezo emfushane. Kodwa-ke, ukucatshangelwa ngokucophelela kufanele kunikezwe ukulinganiselwa kwayo ngenkathi ukhetha ubuchwepheshe
Ingqalasizinda ye-Backsend ecela ama-aggregators namanye amaphrothokholi wokuhambisa ukuhambisa kufanele ahlolwe ukuze aqinisekise ukuthi izinsiza zensizakalo zixazulule ibhodlela. Umhlinzeki wesevisi kungenzeka ukuthi wenze lokho obekudingeka ukuqinisekisa ukuthi amaseva anele angathumela imiyalezo ehambisanayo ngemigqa yocingo ezanele.
Ukuba nohlelo olungathumela imiyalezo engu-20,000 yombhalo ngesikhathi somcimbi esibucayi lusebenza kuphela uma lungenza kanjalo ngemizuzwana. Ukuqinisekisa ukuthi izinto zisebenza njengohlelo ngalunye, ukuhlolwa okuzungezile kohlelo kufanele kwenziwe njalo eminyakeni emibili noma ngaphezulu. Ukunakekelwa kumele kuthathwe ukuqinisekisa ukulungiswa kwedatha njengoba iziphathimandla zemfundo zivame ukuba zibhekane namarekhodi amaningi. Ukuqinisekisa ukuthi umyalezo ofanele ufinyelela kumuntu ofanele, amarekhodi kufanele aqonde futhi asanda kwakamuva.
Abahlinzeki kufanele baqinisekise ukuthi amasistimu wesaziso esiphuthumayo anikezwa imithombo yamandla ehlanzekile nama-backups. Izikhungo kufanele ziqinisekise ukuthi zikhetha eyodwa ezingahlinzeka ngokuxhaswa kwewashi. Ukuqeqeshwa, insizakalo yamakhasimende kanye nosizo lwezobuchwepheshe kufanele futhi kufakwe ebudlelwaneni benkontileka. Inketho yesikhungo ukuthumela izaziso noma kuphi lapho zitholakala khona. Ukuxhumana akufanele kukhawulelwe ngoba umuntu ofanele awekho ezikoleni.
PHAMBI Ukuphepha kwekampasi ngezibhamu anatilics zokuthola izibhamu
Izindaba ezishaqisayo: IHikvision ithole i-Pyronix OLANDELAYO